ओली लाई खनालको प्रश्न : के यो पार्टी तपाईंको घर हो एकलौटी गर्न खोज्ने ?::– Nepal's Digital Paper
ओली लाई खनालको प्रश्न : के यो पार्टी तपाईंको घर हो एकलौटी गर्न खोज्ने ?
प्रकाशित मिति :बिहिबार, फाल्गुन २४, २०७४ Thursday, March 8th, 2018
राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन मात्र एमालेले स्थायी समिति बैठक बोलाएको थियो । औपचारिक र अनौपचारिक गरी पटक–पटक बसेको बैठकले राति १२ बजे मात्र भण्डारीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष केपी ओलीले समझदारीका लागि शीर्ष नेताहरूलाई बिहानै बालुवाटार बोलाएका थिए ।
‘पार्टी महासचिव र अध्यक्षका रूपमा मैले पनि पार्टी हाँकेको छु, अरू नेताले पनि पद्धतिका आधारमा पार्टी चलाएका थिए, तर तपार्इंले सबै पद्धति मिच्नुभएको छ, कुनै नेताको राय पनि लिनुनपर्ने यो पार्टी के तपाईंको घर हो रु’ उनको प्रश्न थियो ।
खनालले आफु राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न चाहेको र यो विषयमा पार्टीको आधिकारिक निकायमा छलफल हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए ।